Switchyard ivelan'ny trano (Substation), China Outdoor Switchyard (Substation) Manufacturers, Suppliers, Factory - HNAC Technology Co., Ltd
Home>Mpanome vokatra>Fitaovam-pitaovana mekanika sy elektrika feno>Tobim-pamokarana ivelany (tobin-tsolika)
Ny toerana misy ny switchgear amin'ny toby booster mandray sy mizara ny angovo azo avy amin'ny hydro-generator set, ary ny fitaovana fitsinjarana herinaratra avo lenta dia mamatsy herinaratra ho an'ny tambajotra na teboka enta-mavesatra aorian'ny fanamafisana. Izy io dia ahitana transformer, switchgear, mitoka-monina switch, inductor mutual, tselatra arrester, busbar fitaovana sy ny rafitra mifandraika amin'izany. Ampitaina amin'ny lavitr'ezaka izy io amin'ny alàlan'ny tokotanin-tsambo.
Azo zaraina ho sokajy roa izany: fitaovana fitsinjarana herinaratra ivelany sy anatiny araka ny toerana fametrahana ny fitaovana elektrika. Ny fitaovana elektrônika 110kV sy 220kV dia apetraka ao amin'ny orinasa rehefa ampiarahina amin'ny toetran'ny fisehon'ny toby famokarana herinaratra, ary ny elanelana isan-karazany dia kely kokoa noho ny fisehon'ny ivelany, noho izany dia kely ihany koa ny faritra. Ny vidin'ny fanorenana sivily dia ambony noho ny drafitra ivelany, ary ny fotoana fanorenana dia lava kokoa, saingy tsy misy fiantraikany amin'ny toetr'andro ratsy izany. Indraindray mba hampihenana ny vidin'ny fanorenana dia mbola apetraka ivelan'ny orinasa ny ampahany amin'ny fitaovana.
Ny fampidirana fohy amin'ny firafitry ny tobim-pamokarana boost:
1. High-voltage Circuit Breaker: Afaka manapaka sy mampifandray ny tsy misy enta-mavesatra sy ny enta-mavesatra ny tsipika sy ny fitaovana elektrika isan-karazany rehefa miasa ara-dalàna ny rafitra; Mba hisorohana ny fanitarana ny sehatry ny loza, dia afaka miara-miasa amin'ny antoka fampitana mba hanapaka haingana ny fahadisoana ankehitriny rehefa tsy nahomby ny rafitra;
2. High-voltage Isolation Switch: Mba hiantohana ny fiarovana ny fitaovana elektrônika avo lenta sy ny fitaovana dia mitana anjara toerana eo amin'ny fitokana-monina eo amin'ny faritra mandritra ny asa fikojakojana, ny switch mitokana dia tsy afaka manokatra sy manidy ny faritra tsy misy entana, ary tsy afaka manokatra sy manidy. manana ny arc extinguishing asa;
3. Current Transformer: Manova ny courant avo ho lasa ambany proportionally. Ny lafiny voalohany amin'ny transformer amin'izao fotoana izao dia mifandray amin'ny rafitra voalohany, ary ny lafiny faharoa dia mifandray amin'ny fitaovana fandrefesana, fiarovana ny relay, sns;
4. Voltage Transformer: Ho an'ny tanjona fiarovana, fandrefesana ary fitaovana, dia ovaina ny voltase avo ho lasa malefaka faharoa manara-penitra amin'ny 100V na ambany kokoa araka ny fifandraisana mifandanja;
5. Mpisambotra tselatra: Izany dia ampiasaina mba hiarovana ny fitaovana elektrônika isan-karazany ao amin'ny rafitra hery amin'ny fahasimbana ateraky ny tselatra overvoltage, miasa overvoltage, ary ny herinaratra matetika overvoltage mandalo. Ny fisamborana dia matetika mifandray amin'ny tariby mivantana sy ny tany, izay mifandray amin'ny fitaovana arovana.